Gcina iipesenti ezingama-30 kubhaliso lweSelfowuni yokuKhusela ukuHanjiswa
Ulwelo: Uyilo, uVavanyo kunye nokwabelana ngeeNkqubo zakho zeSelfowni
NgoLwesihlanu, ngoJuni 27, 2014 NgoLwesine, uJuni 26, 2014 Douglas Karr
Andiqinisekanga ukuba ndikhe ndavavanya i-prototyping elula kuneFluid. Ngokukrakra, kuya kufuneka Nika umhleli wabo uvavanyo lokuqhuba, ilula ngokumangalisayo, inomdla kwaye ine-pallet eyomeleleyo yokutsala kunye nokulahla izinto zomsebenzisi ezibonisa iigridi kunye nobukhulu ngengqondo.
Ulwelo lunesoftware yomdlali osetyenziselwa i-Android, i-iPhone kunye ne-iPad. Bayakuvumela ukuba wakhe iiprototypes ezinemifanekiso emininzi, uthumele ngaphandle ii-screenflows, yongeza izijekulo kunye notshintsho ngokuswayipha, ucofe, ucofe kabini, ulayishe, fade kunye nezenzo zeflip. Ngaphandle kwe-2,000 eyenziwe ngokulungeleleneyo eyenziwe nge-iOS, i-Android, iWindows 8 kunye neewijethi ze-UI zewindows - unokukhuphela imifanekiso yakho.
Martech Zone abafundi banokufumana I-30% isuswe kwirejista yeenyanga ezi-6 ze-UI yeFluid Isicwangciso sobuchule ngekhonkco lethu lokudibana!
Kuxhomekeke kwisicwangciso osikhethileyo, unokuba neeprojekthi ezininzi ezisebenzayo, iforum kunye / okanye inkxaso ye-imeyile, iiprojekthi ezisebenzayo kunye nezikrini zokulayisha ngokwesiko. Zonke izicwangciso ziza neeprojekthi ezingapheliyo, iphepha elingenamkhawulo ngeprojekthi nganye, imbali yenguqulo, amandla okuvavanya kwisixhobo, kunye nokwabelana ngokubambisana kweqela. Ulwelo lukwabonelela nge iqonga lweshishini ziyafumaneka kwiiarhente nakumashishini.
tags: Androidcofa kabiniprototyping droidiphupheflipumbaneulwelo uiiOSprototypingipad prototypingIPhone prototypingprototyping yeselulayokukhuselaprototyping umhleliisilayidikwefasilithitapui prototypingwindows 8ifayile
Ngo-2014: Unyaka wamava abaThengi
Vero: Ukuzenzekelayo nge-imeyile kunye nokumaketha kwakhona